तपाईंको पैसा बैंक खातामै रोकियो कि ! - Khabar Break | Khabar Break
तपाईंको पैसा बैंक खातामै रोकियो कि !
२९ साउन,तपाईंले बैंक खाता खोलेर लामो समय नचलाई बस्नुभएको त छैन ? त्यसो भए तत्काल नै गएर सक्रिय पार्नुहोस् । ६ महिनासम्म बैंक खातामार्फत कारोबार नगरेमा खाता निष्क्रिय हुने गर्दछ । निष्क्रिय खातामा अन्यत्रबाट पैसा जम्मा गर्न तथा रकमान्तर गर्नसमेत मिल्दैन । राजधानी दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
प्राधिकरणले अनुदान सम्झौता गरेका तर बैंकमा आफ्नो खाता सुचारु नगरेका लाभग्राहीलाई यथाशीघ्र सम्बन्धित बैंकमा सम्पर्क राखी खाता सुचारु गर्न अनुरोध गरेको छ । प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले अनुदान सम्झौता गरेलगत्तै पहिलो किस्ता बैंक खातामा गएको तर खाता सक्रिय नगरेका कारण ठूलो संख्याका लाभग्राहीको पैसा निष्क्रिय भएको बताए ।
२०७६ असार मसान्तसम्म पहिलो किस्ता नलिने भूकम्पपीडित पनि लाभग्राहीको सूचीबाट हटेका छन् । अनुदान सम्झौता गरेर पनि पहिलो किस्ता नलिने ५ हजार ५४० लाभग्राही सूचीबाट हटेका हुन् । प्राधिकरणले गत साउन पहिलो साता निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि लाभग्राहीको सूचीमा समावेश भएर २१ असार २०७६ सम्म सम्झौता नगर्ने र असार मसान्तसम्म पहिलो किस्ता नलिने ६२ हजार ८४९ भूकम्पपीडितलाई लाभग्राहीको सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।